Fizarana kits scolaires : Feno hipoka ny coliséum -
AccueilRaharaham-pirenenaFizarana kits scolaires : Feno hipoka ny coliséum
Tohin’ireo ezaka efa fanaon’ny Filoham-pirenena malagasy, Rajaonarimampianina Hery mivady isan-taona, izay notanterahina omaly teny amin’ny Coliseum Antsonjombe, ny fizarana ireo “kits scolaires” ho an’ity taom-pianarana 2017-2018 ity. “Kits scolaires” miisa 60 000 no nozaraina ho an’ireo ankizy rehetra mpianatra eny amin’ny EPP sy CEG eto Antananarivo renivohitra, ary ho an’ireo mpianatra rehetra hanala fanadinana ao amin’ny Cisco Atsimondrano, Avaradrano ary Ambohidratrimo mba ahafahan’izy ireo manovo fahalalana sy fahendrena. Fa ihany koa, ho fanampiana ireo ray aman-dreny entina hanatsarana ny tontolon’ny fanabeazana eto amintsika, izay antoky ny fampandrosoana ny firenena, araka ny fanambaran’ny Filoha Rajaonarimampianina, “ny tanora, ny mpianatra, ny ray aman-dreny, ary ny mpanabe. Mitodika aminareo ny fampandrosoana ny firenena. Ianareo no fototra ny fampandrosoana ny firenena. Ianareo no fototra fananganana ny firenena vanona, ka raha misy mpanao politika sahy milaza fa hampandroso ny firenena dia ianareo izao no hitodiany voalohany, ka izany no hiatrehanay anareo androany (omaly).”
Anjaranay no mampandroso anareo
Marihina fa volan’izy mivady madiodio no nividianana ireo fitaovam-pianarana ireo, ary mbola nohamafisin’ny Filoha izany tamin’ny filazana fa fitiavana manokana avy amin’ny Filohan’ny Repoblika mivady no nanatanterahina ny hetsika, sady fanamby amin’ny fampandrosoana ny firenena ihany koa. “Hita ny fahavonana sy fahavitrihana handray an-tanana ny fampianarana izay zava-dehibe. Tsy mila hanaovana fampielezan-kevitra ny fampianarana, fa ny fampianarana no isan’ny fototra tsy maintsy hanarenana ny firenena. Hikarakara anareo, hikarakara ny fianaranareo, hahatontosa antsakany sy andavany ny fianarana sy ny fampianarana izay ataonareo. Izany no nahatonga anay hampiditra anareo mpampianatra ho mpiasam-panjakana, izany no nahatonga anay hanome fanofanana ny mpanabe rehetra. Izany no mahatonga anay isan’andro isan’andro mitodika amin’ny hanatsarana, hanalebiazana, hanamboarana ny efitrano fianarana. Ianareo no isan’ny andanian’ny fitondram-panjakana ny ampahany betsaka amin’ny fampiasam-bola. Izay anisan’ny asa sosialy ataon’ny fitondram-panjakana, satria anjaranay no mampandroso anareo”, hoy hatrany ny fanazavan’ny Filoha Rajaonarimampianina.
Handala ny fitiavan-tanindrazana
Fotoana izao hoy ny Filoham-pirenena hiaraha-mientana amin’ny fampandrosoana, ka any amin’ireo ankizy izany no mila hatomboka. Nanentana ireo ankizy handala hatrany ny fitiavan-tanindrazana sy ireo soatoavina maha Malagasy ihany koa ny tenany, ka hampihatra izany amin’ny fiainan’izy ireo andavanandro. “50 taona mahery niainana tao anatin’ny fahantrana foana ny firenena. Manana ny harenany ity firenena ity, na voajanahary, na ny olona. Tsy hifaninana tamin’ny tany aloha fa androany (omaly) isika mahatsiaro ho tompon’andraikitra, androany (omaly) hianareo no mandray an-tanana ny fiainanareo sy ny ho avin’ity firenena ity, ka adidinay no manampy anareo, ary izay no hanolorana ampifaliana ny fitaovam-pianarana fa adidinareo no mianatra, manovo fahendrena, manovo fahalalana, ao anatin’izany no hanovozana ny fitiavan-, satria mila izany ity firenena, ry rankizy, ry tanora, ry ray aman-dreny, ka ampianaro ny fitiavan-tanindrazana satria mahatoky izahay fa raha ao anatintsika sy iainantsika izany dia miara-mientana ho fampandrosoana ny firenena, ary ho tafita isika”, hoy izy nanafatra ireo ankizy sy ray aman-drenin’ny mpianatra, ary ireo mpanabe tonga maro be teny amin’ny Coliséum.
Nanotrona ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery teny an-toerana ny lehiben’ny governemanta, Praiminisitra Solonandrasana Olivier Mahafaly sy ireo mpikambana rehetra ao anatin’ny governemanta, ireo mpiara-miasa akaiky amin’ny Filoha, ary ireo mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara. Nandritra izany no nisaoran’ny Filoha ireo mpiara-miombon’antoka noho ny asa sosialy rehetra. Marihina hatrany fa efa tafiditra ao anatin’ny fampiharana ny teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana ity fizarana fitaovam-pianarana izao.